नेकपाको हातमा जोशीको प्रधानन्यायाधीश पद ! – Everest Dainik – News from Nepal
काठमाडौँ, साउन १४ । दीपकराज जोशी प्रधानन्यायाधीश हुने नहुने नेकपाको हातमा रहेको छ । कसरी जोशीको पद नेकपाको हातमा छ ? कारण यस्ता छन्, १५ सदस्यीय समितिमा सत्तारूढ दलका १० सांसद छन् । उनीहरूले चाहे जोशीको नाम अस्वीकारसमेत गर्न सक्छन् ।
परामर्शका क्रममा अधिकांश नेकपा सांसदहरूले जोशीबारे सन्तोषजनक जवाफ दिएनन् । स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले आइतबारसम्म सांसदहरूलाई समितिले ‘आफ्नो विवेक पुर्‍याओस्’ भन्ने जवाफ दिएका छन् । तर समितिका सदस्यहरू पार्टीको धारणा कुरेर बसेका छन् । आज (सोमबार) दिउँसो २ बजे बैठक राखिएकाले सम्भवतस् त्यसअघि मात्र नेकपाले पार्टीको धारणा सांसदहरूलाई दिनेछ । कान्तिपुरमा खबर छ ।
ट्याग्स: Deepakraj joshi, Dipakraj Joshi, कायममुकाम प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशी, दीपकराज जोशी